समूह भिडियो कल गर्नका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू ग्याजेट समाचार
समूह भिडियो कलका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | aPLICACIONES
हामी बनाउन जारी छ यी सिफारिसहरू जुन हामीलाई घरेलु कारावासको बाध्यताका दिनहरूमा थप सहनयोग्य बनाउँदछ। टेक्नोलोजी र सामाजिक नेटवर्क को विकास को लागी धन्यवाद, हाम्रो घरबाट हामी भिडियो कल गर्न सक्दछौं र हाम्रो सम्पर्कमा रहन सक्छौं। व्हाट्सएप, र अन्य सन्देश अनुप्रयोगहरूले परिवार र साथीहरूसँग के भइरहेको छ सो राम्रोसँग राख्नको लागि यसलाई सजिलो बनाएको छ।
तर सम्पर्कलाई अझ वास्तविक बनाउन, भिडियो कलहरूको साथ हामी एक अर्कालाई हेर्न र सुन्न सक्दछौं। केही कुराले हामीलाई अलि नजिक महसुस गराउँदछ। घरबाट आपतकालिन र क्वारनटिनको अवस्था सुरु भएदेखि नै साथीहरू र परिवारसँग धेरै भेटघाटहरू भइरहेका छन् जुन हामीले पालना गरेका छैनौं। त्यसो भए एउटा समूह भिडियो कल समात्नको लागि उत्तम समाधान हो, एक अर्काको अनुहार हेर्नुहोस् र राम्रो समय लिनुहोस्।
1 ह्या video आउट गर्न समूह भिडियो कलहरू
1.2 Google Hangouts
ह्या video आउट गर्न समूह भिडियो कलहरू
आज हामी तपाईलाई लिएर आउछौं नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंले याद गर्नु भएको मानिसहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती मध्ये एउटा सानो छनौट गरेका छौं जुन हामीले धेरै चाखलाग्दो फेला पारेका छौं, उनीहरूले प्रदान गरेका सम्भावना वा उनीहरूको ह्यान्डलिंगको सादगीका कारण। अब तपाईं संग यसको लागि कुनै बहाना छैन, घरबाट, तपाईं परिवार वा साथीहरूसँग समय बिताउन सक्नुहुनेछ.
राम्रो समय हुनुको साथै समूह भिडियो कलका लागि अनुप्रयोगहरू, तिनीहरूसँग व्यावसायिक प्रयोग हुन सक्छ। कार्य टोलीसँग एक बैठक, उदाहरणका लागि टेलिworking्कि continue जारी राख्न सक्षम हुन। र अर्को प्रयोगहरू जुन यी अनुप्रयोगहरू बन्दीयता शुरू भएदेखि नै दिइयो, हो (घर बाट) हाम्रो समूह खेल वर्गमा भाग लिन जारी राख्न.
डाउनलोड QR कोड
विकासकर्ता: व्हाट्सएप LLC
हामीले सिफारिसहरूको यो सूची सुरू गर्नुपर्नेछ सबैजनाले प्रयोग गर्ने अनुप्रयोग। हामीलाई थाहा छ, व्हाट्सएप समयको क्रममा विकसित भएको छ, र केहि समय को लागी यसले हामीलाई भिडियो कल गर्ने विकल्प प्रदान गरेको छ। एउटा एप जससँग हामी सबै परिचित छौं यसको प्रयोगको दैनिक प्रयोगको लागि धन्यवाद, र जसको साथ, तपाईंलाई थाहा छैन भने, तपाईं समूह कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
यो सत्य हो सहभागीको संख्याका हिसाबले व्हाट्सएप मार्फत समूह कल पर्याप्त प्रतिबन्धित छ एकै समयमा सक्रिय। हामी केवल सामान्य कल प्रयोग गर्न सक्छौं तीन थप प्रयोगकर्ताहरूसँग एकै साथ। यदि यो तीन वा चार व्यक्तिको साथ कल हो भने यसलाई प्रयोग गर्न सहज छ भने हामी यसलाई सजिलैसँग थाहा पाउने छौं र हामी कुनै पनि अन्य अनुप्रयोग स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन।
विकासकर्ता: WhatsApp इंक
विकासकर्ता: Google LLC
यो गुगलको आफ्नै अनुप्रयोग हो। पक्कै धेरै यस मा भरोसा अन्जानमा उनीहरूको फोनमा स्थापना भयो पूर्व स्थापित Google प्याकेजको अनुप्रयोगहरू भित्र। एक सन्देश अनुप्रयोग को रूप मा संकल्पना स्नैपशट जुन डरपेर वाट्सएप जस्तो देखिन्छ तर स्पष्टतः असफल भयो। र यद्यपि यो अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन, गुगलले यसलाई आफ्नो अनुप्रयोगको बीचमा राख्दछ।
यस पटक हामी ह्या Hangouts्गआउट्सको बारेमा सन्देश अनुप्रयोगको रूपमा कुरा गरिरहेको छैन। यो थियो एक उत्तम सुविधाहरू, र त्यसो गर्न जारी रहन्छ, भिडियो कलिंग। यस अनुप्रयोगको साथ र हाम्रो गुगल खाताहरू प्रयोग गरेर हामी एक साथ १० व्यक्तिको साथ भिडियो कल साझेदारी गर्न सक्दछौं। विस्तार गर्न सक्षम हुँदै २ we जना सम्ममा यदि हामीसँग एक पेशेवर प्रयोगकर्ता खाता छ.
अर्को सिफारिस तपाईं कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना बिना नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र जुन मा तपाईंले दर्ता गर्न वा खाता सिर्जना गर्नुपर्दैन कुनै पनि नयाँ वेबसाइटमा। तपाईको गुगल खाता तपाईको पहिचान हो र वेब डेस्कटपबाट तपाई सीधा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। अरु के छ त, यसमा रहेको सर्भर पूर्वाधारको लागि धन्यवाद, यसले हामीलाई जडानहरूमा उत्कृष्ट ध्वनि र छवि गुणवत्ता प्रदान गर्दछ.
अब हामी एप्पलको आफ्नै अनुप्रयोगको साथ जान्छौं। एउटा अनुप्रयोग जुन यस अवस्थामा छ सबै एप्पल उपकरणहरूमा पूर्व-स्थापित। त्यसकारण, यदि हामी आईफोन, आईप्याड वा म्याकबुक प्रयोग गर्छौं हामीले कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्दैन अतिरिक्त, वा कुनै प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै, गुगल र ह्या Hangouts्गआउट्सको साथ, हामी हाम्रो एप्पल आईडीको साथ फेसटाइम प्रयोग गर्न सक्छौं खाता सिर्जना नगरीकन।
यस अवस्थामा, धेरै एप्पलको आफ्नै अनुप्रयोगहरू जस्तै, तपाईं यसलाई केवल आईओएस इकोसिस्टम उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केहि यस्तो उपकरण र / वा हामीसँग अपरेटिंग प्रणालीको प्रकारमा निर्भर गर्दै यसको प्रयोगितालाई ठूलो सीमित गर्दछ। तर यदि के भयो भने, यदि सबैसँग एप्पल उत्पादनहरू छन्, एकल वार्तालापमा participants२ जना सम्म सहभागी हुन सक्छन् एकै साथ।
ZOOM क्लाउड बैठकहरू
यहाँ हामी तपाईको खरिद गरिरहेको अनुप्रयोग पाउँदछौं धेरै र धेरै राम्रो प्रसिद्धि हालका महिनाहरूमा। जुन घरेलु कारावासका यी हप्ताहरूमा विस्फोट भएको छ। एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जुन यस अवस्थामा एक भुक्तान संस्करण छ जसले यसको सम्भावनाहरू विस्तार गर्दछ। नि: शुल्क संस्करणको साथ हामी १०० सहभागीहरूसम्म भिडियो कल गर्न सक्छौं, केवल त्यो केसमा निर्भर गर्दै हामीसँग समय सीमा हुनेछ।
सशुल्क संस्करणमा त्यहाँ प्रयोगको समयको बारेमा कुनै सीमितता छैन, र अधिकतम सहभागीको संख्या समान रहन्छ। यसलाई प्रयोग गर्न यो आवश्यक छ, अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न र स्थापनाको साथमा, एउटा खाता सिर्जना गर्नुहोस् कुनै पनि उपकरणमा आफूलाई पहिचान गर्न सक्षम हुन। हामीले एप्सको बाँकी चीजको बारेमा एक नवीनता भेट्टायौं र त्यो हो हामी एक कल कल को माध्यम बाट भ्वाइस मोड मा सामेल हुन सक्छौं.
विकासकर्ता: LogMeIn, Inc।
भिडियो कलहरूको लागि अर्को संचार उपकरण। यो अवस्था मा, GoToMeeting एक कम्प्युटर प्रोग्रामबाट जन्मेको थियो जसले पछि अनुप्रयोग स्टोरहरूमा छलांग बनायो। बाँकी एपको तुलनामा विपरीत दिशामा जन्म जुन हामीले तपाईंलाई भनिरहेका थियौं, जुन पहिले मोबाइल उपकरणहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो र अब हाम्रो डेस्कमा छन्। GoToMeeting, यसको स्थापना पछि, हो स्पष्ट रूपमा व्यावसायिक र व्यापार बैठकहरूमा ध्यान केन्द्रितयद्यपि सबै जस्तै उनीहरू कुनै पनि प्रकारको भिडियो कलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो छ "सीमित" संस्करण केही सीमितताहरूको साथ, र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या जुन प्रत्येक कुराकानीको हिस्सा हुन सक्दछ बैठकको आयोजक द्वारा अनुबंधित खातामा निर्भर गर्दछ। एक साधारण इन्टरफेस यसको प्रयोगको रूपमा, यो स्मार्टफोनमा भन्दा कम्प्युटर वा ट्याब्लेटमा प्रयोग गर्न धेरै सहज छ। डेस्कटपबाट GoToMeeting मा सामेल हुन तपाइँ एक प्रयोगकर्ता प्रोफाइल सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ। यद्यपि मोबाइल अनुप्रयोगबाट, बैठकमा आईडी थपेको छ जसमा तपाईंलाई आमन्त्रित गरिएको छ, तपाईं यसलाई दर्ता बिना प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ अघिल्लो
GoToMeeting - भिडियो कन्फरेन्सिंग र अनलाइन बैठकहरू
चेक आउट गर्नुहोस् संगरोधका लागि सबै भन्दा राम्रो क्लासिक खेलहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » aPLICACIONES » समूह भिडियो कलका लागि उत्तम अनुप्रयोगहरू
सामसु्गले यस बर्षमा LCD स्क्रीन उत्पादन गर्न रोक्दछ
के VPN प्रयोग गर्न आवश्यक छ?
तपाईंको ईमेलमा टेक्नोलोजी र कम्प्युटि aboutको बारेमा भर्खरको समाचार प्राप्त गर्नुहोस्